ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီး ထွက်တဲ့ antibodies ဘယ်လောက်ခံလဲ....... - Hello Sayarwon
ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီး ထွက်တဲ့ antibodies ဘယ်လောက်ခံလဲ.......
တစ်ကမ္ဘာလုံးက ကိုဗစ်ကို ခုခံလာရတာက နှစ်ချီကြာနေပါပြီ။ ဒီကာလအတွင်းမှာ သုတေသီတွေက ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာမှုတွေ အများကြီး လုပ်ဆောင်နေသလို ကာကွယ်ဆေးတွေလည်း ကြိုးပမ်းထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီး ထွက်တဲ့ antibodies ဘယ်လောက်ခံလဲ……. ဆိုတာကိုလည်း လေ့လာနေပါတယ်။
ဒါဆို ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရပြီးလို့ ထွက်လာတဲ့ antibody က ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဘယ်လောက် ကြာကြာခံလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာမှုရဲ့ ရလဒ်ကို ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီး ထွက်တဲ့ antibodies ဘယ်လောက်ခံလဲ…….
ကိုဗစ်ကနေ ပြန်လည် ကျန်းမာလာသူတွေအနေနဲ့ ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ကို ခုခံနိုင်တဲ့ ကိုယ်ခံအား ထွက်လာပါတယ်။ ဒီကိုယ်ခံအားက ခန္ဓာကိုယ်မှာ ၈ လလောက်အထိ ရှိနေနိုင်ပြီး ဒီကာလထက်လည်း ပိုကြာနိုင်ပါတယ်။ ဒီကာလ အတိုင်းအတာက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မှာ မတူပါဘူး။ တချို့ကလည်း ရက်၉၀လို့ ပြောသလို တချို့ကလည်း ၆လလို့ ပြောပါတယ်။
ဒီကိုယ်ခံအားက ကိုဗစ်ကို ခုခံပြီးချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်က အလိုလို ထွက်လာတာပါ။ နောက်ထပ်အခြေအနေ တစ်ရပ်က COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်မှာ antibody ထွက်လာတာပါ။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံလိုက်ရတဲ့အခါ ကိုယ်ခံအားက အဆိုပါ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ခုခံ တိုက်ထုတ်ပါတယ်။ ဒီလို တိုက်ထုတ်တဲ့အခါ ကိုယ်ခံအားဆဲလ်တွေ နဲ့ ပရိုတင်းတွေက ပြင်ပကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ pathogen ကို မှတ်သား ရှင်းလင်းဖို့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ လှည့်လည်ပြီး ရှာဖွေပါတယ်။ တွေ့ရှိတဲ့အခါ တိုက်ထုတ်ပါတယ်။ ဒီလို တိုက်ထုတ်နေချိန်မှာ အဖျားတက်တာ နဲ့ နေထိုင်မကောင်းတာမျိုးကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
Antibodies လို့ခေါ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ပြင်ပကနေ ရောက်လာတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်လိုမျိုး ပြင်ပက အရာတွေကို သွေးထဲမှာ လှည့်ပတ်စီးဆင်းရင်း မှတ်သားပေးတဲ့ ပရိုတင်း တစ်မျိုး
pathogenတွေကို မှတ်သားပေးနိုင်ဖို့ ကူညီပေးတဲ့ Helper T cells
pathogenတွေကို တိုက်ထုတ်ပေးတဲ့ Killer T cells
ခန္ဓာကိုယ်က လိုအပ်ချိန်မှာ antibodies အသစ်တွေကို ထုတ်ပေးတဲ့ B cells တို့က အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြတာပါ။
ကိုဗစ်ကနေ ပြန်ကောင်းလာတဲ့သူတွေမှာ အဆိုပါ ကိုယ်ခံအားမှာ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အရာ ၄ မျိုးစလုံးကို တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ သွေးကို စစ်ကြည့်လိုက်လို့ antibody ထွက်တယ်ဆိုတာက သွေးထဲမှာ ဒီအရာ ၄ ခုလုံး ထွက်ရှိနေလို့ပါ။
ဒီ ကိုယ်ခံအားက ကိုယ်ထဲမှာ ဘယ်လောက်ထိ ကြာကြာရှည်ရှည် ရှိနေမလဲဆိုတာကိုတော့ အတိအကျ ပြောဖို့ ခက်ပါတယ်။
ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရပြီးလို့ ထွက်လာတဲ့ ကိုယ်ခံအားက ၈ လလောက်အထိ ခံတယ်ဆိုပေမယ့် ၄ လလောက်အထိပဲ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဗိုင်းရပ်စ် အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါ ပြင်းထန်မှုကို လိုက်ပြီးတော့လည်း antibodies ထွက်ရှိမှု ကာလက ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ ကူးစက်ခံရတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်ကို လိုက်ပြီးတော့လည်း ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။
ဝါရှင်တန် ဆေးတက္ကသိုလ်က သုတေသီတွေ ဦးဆောင်တဲ့ လေ့လာမှုမှာတော့ ကိုဗစ်ရောဂါ အပျော့စားကို ခံစားရတဲ့သူတွေမှာ ကိုဗစ်ကနေ ပြန်ကျန်းမာလာပြီး လအတော်ကြာတဲ့အထိ ကိုယ်ခံအားဆဲလ်တွေက ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ကို တုံ့ပြန်တဲ့ antibodies တွေကို ဆက်လက်ထုတ်ပေးနေတာမျိုး ရှိပါတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရ အဆိုပါ ဆဲလ်တွေက ဘဝတလျှောက်လုံး ရှိနေပြီး တစ်ချိန်လုံး antibodies ကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေမှာ နောက်ထပ် ဖြစ်နိုင်ခြေကလည်း အတော်လေး နည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရောဂါကို တုံ့ပြန်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ antibodies ပမာဏက ကျဆင်းသွားပါတယ်။
ဒါက ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် တစ်ခုပါ။ ဒီကျဆင်းမှုက ၀ အထိ ကျသွားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ထပ်တော့ ပွားမလာပါဘူး။
လေ့လာမှုတွေအတွင်း တွေ့ရတာကတော့ အကြာဆုံးအနေနဲ့ antibodies က ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ၁၁ လ အထိရှိနေတာပါ။ ဒါက အကြာဆုံး အတိုင်းအတာပါ။
ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရပြီးတဲ့အခါ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို တုံ့ပြန်ဖို့ antibody ကိုထုတ်လိုက်တဲ့ ကိုယ်ခံအားဆဲလ်တွေက ဗိုင်းရပ်စ်ကို တိုက်ထုတ်ပြီးချိန်မှာ သွေးထဲက antibody ပမာဏက ကျသွားပါတယ်။
အရေအတွက်အားဖြင့် နည်းသွားတဲ့ antibody ထုတ်ပေးတဲ့ ကိုယ်ခံအားဆဲလ်တွေက ရိုးတွင်းခြင်ဆီထဲမှာ ကာလရှည်ကြာ တည်ရှိနေနိုင်တဲ့ Plasma cellsတွေအဖြစ် ပြောင်းသွားပါတယ်။ ပမာဏ နည်းသွားပေမယ့် ဒီလို တည်ရှိမှုကနေတဆင့် ကိုယ်တွင်းကို ရောက်လာတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို တိုက်ထုတ်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
ကိုယ်ခံအားထဲမှာ antibody က ကာလတစ်ခုအထိ ရှိနေတယ်ဆိုပေမယ့် ကိုဗစ်ကလည်း နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ကူးစက်နိုင်တာမို့ အကောင်းဆုံးကတော့ antibody ထွက်နေလည်း ကိုဗစ်ကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် ပါးစပ်နဲ့ နှာခေါင်းစည်း တပ်ဆင်တာ၊ လူစုလူဝေး ရှောင်ကြဉ်တာ၊ လက်ဆေးတာတွေကို လုပ်ပေးတာကတော့ အကောင်းဆုံးပါ။
ANSWERED: How long do antibodies last in the body after COVID-19 infection? https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/covid-antibodies-how-long-do-antibodies-last-in-the-body-after-covid-19-infection/photostory/83002351.cms Accessed Date 18 August 2021